Olee otú Kọwaa Nchọgharị History na iPhone
Olee otú Kọwaa Nchọgharị History na Kuki on iPhone
Mgbe ekpocha nchọgharị akụkọ ihe mere on iPhone na-kwuru, ị pụrụ iche nke kacha ụzọ mee ya: ẹkedori Safari> pịa obere akwụkwọ dị ka akara ngosi na ala> mgbata History> enweta Doro Anya History. Ọ bụ ya! Otú ọ dị, nke bụ eziokwu bụ na ọbụna ị na-enweta 'Doro Anya History', oge ọzọ mgbe ị na-eji gị Safari ịchọ ihe, ị nwere ike ina na-atụ aro ihe si nchọgharị igbe, nke na-nyere dabeere na gị nchọgharị akụkọ ihe mere. O yiri ka ndị 'Doro Anya History' dị nnọọ ewepu ndị doro anya akụkọ ihe mere eme si anya gị, ma na-anọgide na gị iPhone. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka kpamkpam doro anya nchọgharị akụkọ ihe mere na kuki site iPhone, m na-atụ aro ị na-agbalị na-esonụ ụzọ.
Gị iPhone na eriri USB
Wondershare SafeEraser bụ ọkachamara ngwá ọrụ nke e mere maka iPhone ọrụ ihichapụ kpam kpam onwe data ma ọ bụ achọghị data. Ọ bụla ehichapụ data ga-adị recoverable ma ọ bụ viewable site ọ bụla ndị mmadụ. N'ihi ya, gị niile onye data ga-akwụsị na aka gị, na-eme onwe gị ozi mara mma nchebe. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ maka otú iji ya.
Nzọụkwụ 1 Download na wụnye Wondershare SafeEraser
Get nri version nke Wondershare SafeEraser echichi ngwugwu. Wụnye ya na gị na kọmputa na-ẹkedori ya. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Ọ bụrụ na a promt Pop elu, na-arịọ gị ka ị na-atụkwasị obi na kọmputa, ị kwesịrị ị na enweta na 'Trust' button na gị iPhone. Ọ bụrụ na ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ gị iPhone-egosi na elu ekpe nke isi window.
Nzọụkwụ 2 iṅomi maka nchọgharị akụkọ ihe mere na kuki na iPhone
Ke akpan window, pịa 'ihichapu Private Data' ka usoro ihe omume Doppler niile Safiri akụkọ ihe mere eme na kuki na gị iOhone. Ị maara, Safari akụkọ ihe mere eme na kuki nwe ka onwe data nke na-egosipụta ọdịnaya na ị na ịchọgharịrị na ya.
Nzọụkwụ 3 Doro Anya iPhone nchọgharị akụkọ ihe mere na kuki
Mgbe iṅomi na dechara, ị pụrụ ịhụ Safari Cache, Safari History na Safari Cookies-egosipụta. Ego ọ bụla n'ime ha ịhụ nkọwa. Iji hichapụ ihe niile Safari History, Safari Kuki na Safari Cache, ego ha na pịa 'ihichapu Ugbu a'.
Hichapụ iPhone Data nke na-ere
Mfe nzọụkwụ iji Hichapụ Chakwasa ihie Search History na iPhone
> Resource> Clean-elu> Olee otú iji Kọwaa Nchọgharị History na kuki na iPhone